‘ट्युन’ मिलेका न्ह्यू
२ भदौ २०७६, सोमबार
२०७५ जेठ ५ शनिबार ०६:३१:००
– नरेश फुयाँल
ओमबहालमा न्ह्यू (बज्राचार्य) जन्मिँदा मनोरञ्जनका साधन खासै थिएनन् । बच्चाहरूलाई फुटबल र टेबलटेनिस थिए, वयस्क र उमेर पाकेकाहरूलाई डबलीमा हुने नाचगान । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा जम्मा पाँच सिनेमा हल थिए । त्यसमा पनि सबैको पहुँच थिएन ।
रेडियोमा बज्ने गीत–संगीत सुनेर मनोरञ्जनको भोक मेटाउनु पर्ने समय थियो । न्यूहको घरमा सांगीतिक माहोल थियो । उनलाई परिवारले माउथ–हार्मोनियम किनिदियो । उनको मुख हरबखत त्यसैमा टाँसिन थाल्यो । सात वर्षको उमेरमै गीतको सुरमा उनको ओठले माउथ–हार्मोनियम मज्जाले रेट्न थालिसकेको थियो ।
उनले संगीतको धून राम्रैगरी निकाल्न थाले पनि भविष्यमा गएर ‘भयंकर म्युजिसियन’ बन्छु भन्ने थिएन । तर, पनि सानो बच्चाले मीठा–मीठा धून निकाल्दा परिवार दंग पथ्र्यो, त्यसमै रमाइरहेका थिए न्ह्यू ।
“कहिलेकाहीँ ओहो ! कस्तो राम्रो बजाएको भनेर बुवाका साथीहरूले चकलेट किनिदिनुहुन्थ्यो, त्यतिमै दंग पर्थें,” न्ह्यू सम्झन्छन् ।
धर्मराज थापाको ‘हो... हो माले हो...हो...’ रेडियोमा बजेको खुब सम्झिन्छन् न्ह्यू । बुझेर होस् या नबुझेरै– उनलाई त्यो गीतले तान्थ्यो । कुमार बस्नेतको ‘दिउँला...’, ‘लै बरी लै...’ ले पनि उनको ध्यान खिच्थे । नारायण गोपालको ‘आँखाको भाका आँखैले...’ पनि सुनेको उनको सम्झनामा छ ।
संगीतको तिर्खा उनलाई माउथ–हार्मोनियमले मात्रै मेटिदिन सकेको थिएन । संगीतको सुर र तालको ज्ञान लिन मन थियो तर कहाँ लिने, उनलाई थाहा थिएन । परिवारले पनि छोरोलाई संगीत सिकाउनैपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुुस गरेको थिएन ।
सिनियरहरूले गितार बजाएको देख्दा उनलाई पनि रहर लाग्थ्यो । “त्यो बेला स्टेजमा इलेक्ट्रिक गितार बजाएको देख्दा म आफैं चम्किन्थें, मन बुरुक्–बुरुक् उफ्रिन्थ्यो,” उनी नोस्टाल्जिक हुन्छन्, “ओहो ! कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला यस्तो गितार बजाउन पाए भन्ने लाग्थ्यो ।”
तर, त्यो गितार कसरी पाउने र कसले बजाउन सिकाइदिने ? असम्भवप्रायः थियो न्ह्यूका लागि ।
शिक्षकहरूले खाली तर्साएर पढाउँथे । उनलाई मन नपर्ने । रञ्जना सिनेमा हल घरनजिकै थियो । उनी स्कुलबाट भागेर रञ्जनामा सिनेमा हेर्थे । पढाइमा ध्यान थिएन । संगीतमा आशक्त । सुरुमा माउथ–हार्मोनियम बजाएको देखेर दंग पर्ने आमाबुवा बिस्तारै न्ह्यूको आशक्ति देखेर आत्तिन थाले ।
संगीतमा लाग्ने व्यक्तिबारे समाजको त्यति राम्रो धारणा थिएन । न्ह्यू पढाइमा कमजोर बन्दै गएको भन्दै परिवारले उनलाई त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय (फर्पिङ)मा होस्टल राखेर पढाउन थाल्यो । उद्देश्य एउटामात्रै थियो— जसरी हुन्छ, न्ह्यूलाई संगीतबाट टाढा राख्ने । त्यतिबेला उनी ६ कक्षामा पढ्थे ।
तर, न्ह्यू फराकिलो निधार लिएर जन्मिएका थिए । त्यही होस्टलमै गितार बजाउन सिकिरहेका शिक्षक भेटिए । उनी थिए, विज्ञानका शिक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ।
संगीतप्रति न्ह्यूको मोह पहिचान गरेका प्रकाशले भने, “न्ह्यू, तिमीलाई म गितार बजाउन सिकाइदिन्छु ।”
उनी आफैं पनि भर्खर गितार सिक्दै गरेका थिए । खासै आउँदैनथ्यो ।
“मलाई मेरो जिन्दगीमा त्यस्ता व्यक्तिले संगीत सिकाए, जो आफैंमा संगीतका विद्वान नभएर भर्खर सिक्दै गरेका थिए,” न्ह्यू हाँस्छन्, “सधैं संयोग यस्तै प¥यो ।”
दार्जिलिङबाट आएका त्यही स्कुलका होस्टल वार्डेन एडमन्ड पनि गितारका शौखिन थिए ।
प्रकाशले टेकुको नेसनल ट्रेडिङबाट गितार किनेका थिए । त्यो बेला (२०३४ सालतिर) गितारको मूल्य ३७५ रुपैयाँ पथ्र्यो । प्रकाशकै क्वार्टरमा पुगेर न्ह्यू गितार बजाउँथे ।
प्रकाश भने गितार सिक्न नसकेर ‘फ्रस्टेड’ भइसकेको न्ह्यू सम्झिन्छन् ।
एकदिन प्रकाशले उनलाई भने, “यो गितार नयाँ छ, तिमी किन ।”
न्ह्यूले सोधे, “कतिमा दिने ?”
“तिमीलाई सय रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिन्छु ।”
गितार किन्न २७५ रुपैयाँ चाहिने भयो । त्यो रकम सानो थिएन ।
संगीतको आशक्तिबाट छुटाउन होस्टेल पठाइदिएको परिवारले गितार किनिदिने सम्भावना शून्य थियो । त्यसैले जति नै छुट पाए पनि न्ह्यूले घरमा भन्न सकेनन् । तर, उनलाई त्यो गितारले झनपछि झन् खिच्न थाल्यो ।
जाडो बिदामा घर फर्किएका थिए । संगीतप्रतिको मोह देखेर न्ह्यूकी दिदीको मन पग्लियो । दिदी र आमा धारामा लुगा धोइरहेका थिए । दिदीले आमालाई भनिन्, “आमा, यसका साथीहरूले यो ट्यालेन्ट छ भन्छन्, यसलाई गितार किन्देऊ न ।”
आमाले भनिन्, “हुन्छ नि त, कति पर्दोरेछ ?”
न्ह्यूले भने, “२७५ मा दिन्छु भनेको छ ।”
“हुन्छ, ल किन् न त ।”
“कहिले जाने ?”
न्ह्यूले भने, “भोलि ।”
“त्यो बेलामा २–३ सयमा महिना दिनको घर खर्च टथ्र्यो । त्यस हिसाबले २७५ रुपैयाँमा भनेको निकै महँगो थियो,” न्ह्यू भन्छन्, “दिदीले पनि गीत गाउँथी । आफूले गाउँदा भाइले गितार बजाइदियोस् भन्ने चाहना भएर आमालाई फकाइदिएको हुनुपर्छ ।”
पहिलो पटक न्ह्यूलाई निद्रा लागेन । रात लामो भयो । बल्लबल्ल बिहान भाले बास्यो । उनले आमालाई झक्झकाएर उठाए ।
गितार किन्न आमाले न्ह्यूलाई २७५ रुपैयाँ दिइन् । फर्पिङसम्म आउन–जानका लागि भाडा पनि छुट्टै दिइन् । पैसा हराउला भनेर आमाले कोटको खल्ती सेफ्टी पिनले सिइदिइन् ।
गाडी चढेर फर्पिङ पुगे न्ह्यू । विद्यार्थीको कापी जाँचिरहेका थिए प्रकाश । न्ह्यूले भने, “सर, म त तपाईंको गितार किन्न आ’को ।”
प्रकाशले त ‘माइन्ड चेन्ज’ गरिसकेका पो रहेछन् ! “ओ न्ह्यू, यो २७५ त मलाई अलि अप्ठ्यारो भएन र ?”
जिन्दगीका सारा सपना एकैपटक चुँडिएझैं लाग्यो । आँखा टल्पलाए । केही बोल्नै सकेनन् । न्ह्यूका आँखाबाट सपनाहरू आँसु बनेर झर्न लागेको देखेर प्रकाशले हतारहतार भने, “लैजाऊ लैजाऊ, भैगो नरोऊ ।”
काँधमा गितार बोकेर न्ह्यू घर फर्किए । त्यो दिनको ‘एक्साइटमेन्ट’ आज पनि सम्झिँदा न्ह्यू उस्तै ‘इमोसनल’ हुन्छन् ।
“खोई मलाई कुरा गर्नै आउँदैन, मैले भनिराखेको भै’राछ कि छैन हो ?” लहरै बगिरहेको कुरा बीचमै रोकेर न्ह्यू हामीतिर फर्किए । हामीले उनलाई आश्वस्त पार्दै भन्यौं, “होइन ठीक छ । हामीले सुन्न खोजेको यही हो ।”
अन्तर्वार्ताका लागि आग्रह गर्दा न्ह्यूले शुरुमै भनेका थिए, “मलाई बोल्नै आउँदैन । प्रायः म एउटा भनिरहेको हुन्छु, तर आउँदा अर्कै भएर आइरहेको हुन्छ ।”
हामीले आश्वस्त पार्‍यौं, “तपाईंले भनेका कुरामात्रै आउँछन् । हामी बंग्याएर, घुमाएर लेख्दैनौं ।”
त्यसपछि बल्ल उनी बोल्न राजी भएका थिए । दोस्रोपटक आश्वस्त पारेपछि उनी फेरि स्कुलतिर फर्किए ।
स्कुलका प्रधानाध्यापक संगीतका शौखिन थिए । तर, होस्टलमा कुनै पनि वाद्यवादन सामग्री राख्न कसैलाई अनुमति थिएन । प्रधानाध्यापकले न्ह्यूलाई भने त्यो छुट दिएका थिए । न्ह्यूको कोठामा सधैं गितार हुन्थ्यो ।
त्यो स्कुलमा विद्यार्थीलाई गीत–संगीत सिकाउन उदितनारायण झा, द्वारिकालाल जोशी, सत्यनारायण भण्डारीहरू आइरहन्थे । तर, कहिल्यै पनि विद्यालयस्तरीय सांगीतिक कार्यक्रम र राजाको जन्मजयन्तीमा गाउनका लागि छनोट हुँदैनथ्यो । त्यसैले प्रधानाध्यापक चिन्तित देखिन्थे ।
कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा न्ह्यू र उनका शिक्षकबीच कुरा मिल्यो, “जस्तो हुन्छ, हामी आफैं एउटा गीत कम्पोज गरौं ।”
साथीहरूले त्यहीँ गीत लेख्न थाले । दुइटा गितारमा कम्पोज गरिएको गीत तयार भयो । राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवमा गाउनका लागि छनोट भयो । न्ह्यूसहित ६–७ जना मिलेर गीत गाए । त्यो क्षण उनी जीवनमा कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन् ।
० ० ०
गीत–संगीतमा लागेर पेट पालिँदैनथ्यो । यो पेशा होइन, नितान्त शोखमात्रै हुन्थ्यो । भविष्यको चिन्ता गर्नेहरू यसबाट बेलैमा ओझेल पर्थे । जे त होला भन्नेहरू छोड्न सक्दैनथे । यसमै भर परेर कोही बाँच्दैनथे ।
यही समय दीप श्रेष्ठका गीतसँग नजिकिए न्ह्यू । ‘विधवाको सिन्दुर...’, ‘जति हाँसूँ भन्थें....’ जस्ता दीपका गीतमा उनी हराउँथे । ‘अधरको मुस्कान त के...’ उनको मुटु छोएको गीत हो । उनले गितारमा गाएको पहिलो गीत पनि यही हो ।
टेलिभिनज थिएन । गीत भनेको सुन्नेमात्रै हुन्थ्यो, रेडियोमा । गीत सुनेर यो गायक कस्तो होला भन्ने हुन्थ्यो न्ह्यूलाई । उनले सुनेका गायकहरू कहिलेकाहीँ डबलीमा आउँथे ।
न्ह्यूले रेडियोमा गीत सुनेर यस्तो होला भनेर अनुमान गरेका अनुहार डबलीमा देख्दा कहिल्यै मिलेन । उनको मस्तिष्मा रहेको फत्तेमान, नारायण गोपाल र दीप श्रेष्ठको अनुहार र डबलीमा देखिएका उनीहरूको अनुहार अलिकति पनि मिलेन ।
न्ह्यूका काका दीपका साथी रहेछन् । उनको घरमा पनि आइरहँदा रहेछन् । तर, न्ह्यूलाई थाहै थिएन । अहिले उनीसँग दीप भन्छन्, “यो घरमा एउटा केटा ट्यालेन्ट छ भन्ने सुनेको थिएँ । तर, कसरी तिमीसँग भेट भएन । सधैं मिस भयो, मलाई पनि थाहा छैन ।”
न्ह्यू अहिले अनुमान लगाउँछन्, “शायद यो केटो ट्यालेन्ट छ, त्यसैले हामीसँग आएर बोल्दैन, कस्तो घमण्डी रहेछ भनेर बोलाउनुभएन कि भन्ने लाग्छ । तर, थाहा छैन कसरी भेट भएन । यो मेरो अनुमानमात्रै हो ।”
०३८ मा उनले एसएलसी दिए । पास हुन्छु भन्ने आशै थिएन तर पनि रिजल्ट आउँदा कतै नाम आइहाल्छ कि भनेर हेर्न भने उनी छुटाउँदैनथे । तेस्रोपटक बल्लबल्ल पास भए ।
त्यतिबेला पश्चिमी गीत–संगीत सुन्ने खासै चलन थिएन । गीत सुन्ने माध्यम भनेकै रेडियो हुन्थ्यो । क्यासेट प्लेयर यदाकदा देखिन्थे । ती किनेर बजाउनु भनेको सपनाजस्तै हुन्थ्यो । झोछेंमा हिप्पीहरू देखिन्थे । लट्टा कपाल भएकाहरू बोराजस्ता पाइन्ट र सर्ट लगाएर हिँड्थे । कति त गितार बोकेर हिँड्थे । उनीहरूलाई आकर्षित गर्न रेस्टुराँहरूले अंग्रेजी पप गीत बजाउँथे । ती गीत सुनेर सानैदेखि प्रभावित भएका न्ह्यू बिस्तारै पश्चिमी संगीततर्फ आकर्षित भए । साथीहरूसँग मिलेर ‘ब्लु मुन’ नामक ब्यान्डै खडा गरे । उनी त्यसमा ‘लिड गिटारिस्ट’ थिए । त्यसले खासै केही गर्न सकेन । ब्यान्ड मेम्बरहरू छोड्दै गए । उनी एक्लै भए ।
उनी गितार बजाइरहेका थिए । साथीहरू आ–आफ्नो कामको लाइनमा लागिसकेका थिए । न्ह्यूले जति गितार बजाउन सिके, आफैं सिके । सिकाउने कोही थिएन । उनलाई लाग्न थाल्यो— यहाँभन्दा माथि जान सक्दिनँ । उनी आफ्नै चिन्तामा थिए, उनलाई देखेर परिवार चिन्ता गर्न थाल्यो ।
मन त्यसै बरालिरहेको थियो । एकदिन अचानक एक बेलायती नागरिकसँग उनको भेट भयो । न्ह्यूले गितार बजाएको सुनेर उनी प्रभावित भएछन् । उनी पनि संगीतकर्मी भएकाले सोधे, “कहाँ सिक्यौ तिमीले गितार ?”
न्ह्यूले भने, “मैले आफैं प्राक्टिस गरेर सिकेको ।”
उनी प्रभावित भएछन् । न्ह्यूलाई पढ्नका लागि बेलायत बोलाए । स्पोन्सर गर्छु भनेर बेलायतबाट कलेजको डकुमेन्ट पनि पठाए तर न्ह्यू गएनन् । पछि मामाका छोराले ‘संगीतका लागि पोल्यान्ड राम्रो छ, आऊ पढ्न’ भन्दा उनलाई परिवारले रोक्यो, “नारायण गोपाल र गोपाल योञ्जनको त केही काम छैन, तैले म्युजिक सिकेर के गर्छस् ?”
त्यसपछि न्ह्यू कमर्स पढ्न जान थाले । शायद जहाँ पुग्नु नै थिएन, उनी त्यहीँ गए । “मेरो लाइफको सबैभन्दा ठूलो मिस्टेक नै त्यही थियो,” अहिले सम्झिँदा उनलाई दिक्क लाग्छ ।
अहिले जस्तो होटल तथा रेस्टुराँमा समेत गीत गाउन पाइँदैनथ्यो । सोल्टी होटलमा मात्रै गीत गाउने चलन थियो । त्यसमा ‘प्रिज्म ब्यान्ड’ले गीत गाइरहेको थियो ।
“अहिलेजस्तो होटलमा गीत गाउनमात्रै पाएको भए म त ढुक्कै हुन्थें । तर, सोल्टीबाहेक अन्त गीत गाउने चलनै थिएन,” उनी भन्छन् ।
नेपालमा बसेर पाश्चात्य होइन, नेपाली शैलीकै गीत गाउनुपर्छ भन्ने लागेर न्ह्यू नेपाली मन र पनका गीत कम्पोज गर्न थाले । तर, पुरानैभन्दा केही नयाँ ‘फ्लेबर’ दिनुपर्छ भन्ने उनको मनमा लागिरहन्थ्यो ।
उनले रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा दिए । पास भए । ‘बचन देऊ मेरी माया...’ बोलको गीत रेकर्ड गरे । तर, खासै राम्रो भएन ।
उनले कम्पोज गरेको गीत रेडियो नेपालको राष्ट्रव्यापी गायन प्रतियोगितामा प्रथम भयो । ‘गोरखापत्र’ र ‘राइजिङ नेपाल’मा समाचार छापियो । रेडियो नेपालले समाचार बजायो । न्ह्यूको नाक घिरौंलाजत्रो भयो । उनले एक वर्षसम्म केही काम गरेनन् । शायद उमेरै त्यस्तै थियो । कोही नयाँ मान्छेसँग भेट हुँदा उनी घुमाईफिराई त्यही प्रसंग जोड्थे र आफू प्रथम भएको सुनाउँथे । अहिले त्यो सम्झिँदा उनी आफैंलाई अचम्म लाग्छ ।
युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ न्ह्यूका बुवाका साथी थिए । उनीहरूको घरमा आइरहन्थे । न्ह्यूलाई होस्टलमा लगेर राख्नुपर्छ भन्ने पनि उनी नै थिए । तत्कालीन राजसभा सदस्यसमेत रहेका सिद्धिचरण न्ह्यूलाई खुब माया गर्थे । उनलाई आफ्नै कोरला कारमा राखेर सिद्धिचरणले होस्टेल पुर्‍याएका थिए ।
न्ह्यूले आफ्नो पहिलो रेकर्ड भएको गीत सुनाए । सिद्धिचरणले मन पराएनन् । उनले भने, “गीतले मुटु छुनुपर्छ । अलिअलि पागल हुनुपर्छ अनिमात्रै गीत हुन्छ । कलाकार भइन्छ ।”
न्ह्यूको मन खल्लो भयो तर उनी रिसाएनन् । किनकि सिद्धिचरणले उनलाई निकै माया गर्छन् भन्ने उनलाई थाहा थियो ।
केही समयको अन्तरालपछि न्ह्यूले बाल गीति संग्रह निकाले, ‘चुली चिया चँ चँ’— दुर्गालाल श्रेष्ठको शब्द तथा रिमा गुरुङको स्वरमा ।
३० वर्षअगाडिको एकदिन सिद्धिचरण घरमा आएका थिए । न्ह्यूले ‘चुली चिया चँ चँ’को गीत सुनाए । त्यस दिन न्ह्यूलाई उनले भने, “तिमी अब कलाकार भयौ । मेरो गीतमा पनि ट्युनिङ गरिदेऊ ।”
तर, त्यो बेला युगकवि सिद्धीचरणका भीमकाय रचनामा ट्युनिङ गर्न सक्ने ल्याकत आफूमा भइनसकेको लाग्यो न्ह्यूलाई । तर, जब ‘अब सक्छु’ भन्ने लाग्यो, सिद्धिचरणले संसार छाडिसकेका थिए ।
न्ह्यूका होस्टलदेखिका साथी थिए सुरेश गुरुवाचार्य । उनको घरमा विवाह थियो । विवाहको काम गर्न न्ह्यू पूरै खटिएका थिए ।
स्वरसम्राट नारायण गोपाल सुरेशका काका थिए । विवाहमा उनी पनि आएका थिए । नारायण गोपाल विवाह समारोहमा सबैसँग हाँसो–ठट्टा गरिरहेका थिए । उनको हातमा चुरोट थियो । आँखाले सलाई खोजिरहेका थिए । न्ह्यूले देखे । चुरोट सल्काइदिए ।
“म कस्तो थिएँ, मलाई अहिले सम्झिँदा ग्लानि हुन्छ । जसका गीत सुनेर हुर्किएको थिएँ, उहाँलाई नै नचिनेझैं गरें, बोलाइनँ,” न्ह्यू भन्छन्, “त्यो बेला उहाँलाई बोलाएको भए हुन्थ्यो भन्ने अहिले पनि लागिरहन्छ ।”
गीतमा संगीत भर्नु उनको दैनिकीजस्तै बन्दै गयो । बिस्तारै उनका सिर्जना स्रोताले मन पराउन थालेका थिए । आफ्ना कम्पोज उनी साथीहरूलाई सुनाउँथे । सबैले ‘राम्रो छ’ भन्थे । न्ह्यू दंग पर्थे ।
एकदिन उनीसम्म मह (मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य) जोडी आइपुग्यो । उनीहरू एउटा गीत कम्पोज गराउन न्ह्यूसम्म आइपुगेका थिए । गीतको बोल उनीहरूसँगै थियो । न्ह्यूले ट्युनिङ तयार पारे । मह जोडीले सुन्यो र भन्यो, “हाम्रो गीतको थिमअनुसार भएन । यो गीतमा हामी यो ट्युनिङ राख्दैनौं । अलि फरक खालको ट्युनिङ गर्नुस्, जसले शब्दलाई न्याय गरोस् ।”
आजसम्म कसैले भएन त के, ठिकै लाग्यो भनेर पनि कसैले भनेका थिएनन् । तर, मह जोडीले ‘भएन’ भनेपछि न्ह्यू छाँगाबाट खसैजस्तै भए ।
उनले त्यसलाई नयाँ ट्युन दिने प्रयास गरे तर सकेनन् । कति मेहनत गर्दा पनि ट्युन फुरेन । उनी बडो अप्ठ्यारो बिन्दुमा पुगे । आफैंलाई प्रश्न गरे, “कम्पोज भनेको त मेरो बुताभन्दा बाहिरको काम रहेछ । अरुले दिएको एउटा ‘थिम’मा काम गर्न नसक्ने म कसरी राम्रो कम्पोजर हुन सक्छु ?”
साथीलाई पनि यही कुरा सुनाए । सबै साथीले उनलाई हतोत्साही नहुन भन्दै सम्झाए ।
‘कुल’ भएर न्ह्यूले नयाँ ट्युन दिने प्रयास गरे । नयाँ ट्युन पनि भयो । उनले फेरि मह जोडीलाई सुनाए । मह जोडीले भन्यो, “हो ऽऽऽ हामीले खोजेको यस्तै ट्युन हो ।”
अनि बजारमा आयो, ‘सय थरी बाजा एउटै गीत...’
यही गीत हो, जसले न्ह्यूलाई नेपाली सांगीतिक बजारमा चिनायो र उनले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेरेनन् ।